झापामा पहिलो रबर उद्योग सञ्चालनको तयारी - कृषि पत्रिका
आइतबार १६ फागुन, २०७७
झापा। नेपालमा रबर खेती शुरु भएको ३० वर्षपछि झापामा रबर उद्योग स्थापना भएको छ । कनकाई नगरपालिका–७ मा रु २० करोड लगानीमा स्थापित कनकाई रबर इन्डस्ट्रिज सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।
विसं २०४६ मा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएसँगै झापाको शनिश्चरेमा पहिलोपल्ट परीक्षणको रुपमा रबरको बिरुवा रोपिएको थियो । शनिश्चरेका जयप्रसाद ढकाल र उनको परिवारले पाँच हेक्टर जग्गामा पहिलोपल्ट रबर खेती गरेको थियो । हाल झापा, मोरङ र सुनसरीमा करीव ७०० हेक्टरमा रबरको खेती भइरहेको छ । रबरको खेती फस्टाउँदै गएपछि स्वदेशमै उद्योग सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरी काठमाडौँ र झापाका लगानीकर्ताले साझेदारीमा कनकाई रबर इन्डस्ट्रिज स्थापना गरेका हुन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं ८ लाई रबर ग्राम घोषणा गर्दै नमूना रबर खेतीका लागि सहयोग पुर्याउने भएको छ । एग्रो टुरिज्मको अवधारणाबमोजिम बुद्धशान्तिमा नमूनाको रुपमा रबर ग्राम परियोजना सुरु गरिएको रबर ग्रामका सचिव सीताराम बाँस्तोलाले बताए । फाउन्डेसनले भारतबाट उन्नत जातको बिरुवा ल्याएर किसानलाई बाँड्ने र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उनले भनाइ छ । रबर ग्राममा साना किसानलाई समेटिने र लघु उद्योग सञ्चालन गरी नोट बाँध्ने रोल रबर र इरेजर उत्पादन गरिने उनले जानकारी दिए । फाउन्डेसनले लघु उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग दिलाउने भएको छ ।
१४ बालीका ३६ उन्नत जात उन्मोचन
माछा खाने गर्नुभएको छ ? कतै हानिकारक फरमालिन प्रयोग त भएको छैन !
किसानका लागि मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ : प्रधानमन्त्री ओली
इतिहास बन्यो बैतडी सतबाँझको स्याउ
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रीमा यादव, आरती पौडेललाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेबारी